घरमा बस्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् – Noor Health Life
घरमा बस्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्
१. आफ्नो दिनको योजना बनाउनुहोस्
हामी सबै नयाँ तर अनौठो जीवनशैली अपनाइरहेका छौं। यो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि खतरा हुन सक्छ।
किनकि यो दिनभर पजामामा बस्न प्रलोभन हुन सक्छ, दैनिक दिनचर्याहरू हाम्रो पहिचान, आत्म-विश्वास र उद्देश्यको लागि आवश्यक छन्।
तपाइँको दिन लगभग तपाइँ सामान्यतया जस्तै सुरु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र हिड्न, रमाइलो गर्न, र सामाजिक र प्रतिबिम्बित गर्न प्रत्येक दिन समय छुट्याउनुहोस्।
2. हरेक दिन थप सक्रिय हुनुहोस्
सक्रिय रहनुले तनाव कम गर्छ, ऊर्जा बढाउँछ, हामीलाई थप सतर्क बनाउँछ र हामीलाई राम्रोसँग सुत्न मद्दत गर्छ।
तपाईंको दिनमा शारीरिक गतिविधि र संलग्नता समावेश गर्न विभिन्न तरिकाहरू फेला पार्नुहोस् र तपाईंको लागि उत्तम काम गर्ने केही कार्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
घरमा पनि आफ्नो शरीरलाई सक्रिय राख्ने र व्यायाम गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्।
3. रमाइलोको लागि केहि प्रयास गर्नुहोस्
आराम गर्न र वर्तमान परिस्थितिमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न र नकारात्मक भावनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
केहि ध्यान र सास फेर्ने अभ्यासहरू प्रयास गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई मद्दत गर्छ भनेर पत्ता लगाउन। उदाहरणका लागि, कहिलेकाहीं हामी यति तनावग्रस्त हुन्छौं कि हामी कसरी शान्त महसुस गर्ने भनेर पनि याद गर्दैनौं। जब तपाईं तनावले अभिभूत हुनुहुन्छ, बिस्तारै तपाईंको मांसपेशीहरूलाई आराम गर्ने प्रक्रियाले तपाईंलाई कसरी शान्त रहन सिकाउँछ।
४. अरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्
तपाईं एक्लो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी जब तपाईं घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। तपाईंका सहकर्मीहरू, साथीहरू, परिवार र अन्यहरूसँग सम्पर्कमा रहन रचनात्मक तरिकाहरू खोज्नुहोस् ताकि तपाईं (र तिनीहरू) थप जोडिएको र समर्थित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
मेल, फोन, सामाजिक सञ्जाल, वा भिडियो च्याट मार्फत, तपाईंको लागि काम गर्ने संचार गर्ने तरिकाहरू फेला पार्नुहोस्। यो प्रक्रिया भिडियोमा एक कप चिया बाँड्नेदेखि लिएर अनलाइन गेम सँगै खेल्ने वा प्रोत्साहनजनक पाठ पठाउनेसम्मको दायरा हुन सक्छ।
५. मनन र आत्मसंयम देखाएर समय बिताउनुहोस्।
हरेक दिन राम्रो के हो भनेर सोचेर समय बिताउनुहोस्। तपाईंका उपलब्धिहरू र तपाईं कृतज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जतिसुकै तुच्छ किन नहोस्। एक धन्यवाद डायरी राख्ने विचार गर्नुहोस् जसमा तपाईं सुत्नु अघि प्रत्येक रात दुई वा तीन कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ।
माइन्डफुलनेस सुझावहरूले तपाईंलाई बेकारका विचारहरूको सट्टा आफ्नो स्थितिमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्न सक्छ (यद्यपि ती गम्भीर अवसाद भएका मानिसहरूका लागि उपयोगी नहुन सक्छन्)।
6. आफ्नो निद्रा सुधार गर्नुहोस्
अनिश्चितताको अनुभूति र दैनिक जीवनमा हुने परिवर्तनहरूले तपाईंलाई सुत्न धेरै गाह्रो भएको हुन सक्छ।
तपाईको निद्रा सुधार गर्न तपाईले गर्न सक्ने धेरै चीजहरू छन्। यदि सम्भव छ भने, सप्ताहन्तमा एकै समयमा ओछ्यानमा जाने र हरेक दिन एउटै समयमा उठ्ने लक्ष्य राख्नुहोस्, र सम्भव भएसम्म प्राकृतिक सूर्यको प्रकाश प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईंको शरीरको घडीलाई नियमित गर्न मद्दत गर्छ जसले तपाईंलाई राम्रोसँग सुत्न मद्दत गर्छ। थप प्रश्न र उत्तरहरू प्राप्त गर्न तपाईं नूर हेल्थ लाइफसँग इमेल र व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com